Quudinta kalluunka | Kalluunka
Quudinta kalluunka waa mid aad muhiim u ah, maadaama haddii aan laga taxaddarin aan sababi karno dhimashada xoolaha cunno saa'id ah darteed. Waa inaan maskaxda ku haynaa in xayawaankani ay caado u leeyihiin inay cunaan mar kasta oo cunto loo sameeyo, marka wax xakameyn ah kuma lahan cunidda cunnada, sidaa darteed hubaal waan dili karnaa.
Meeshaan Waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato faahfaahinta sida jadwalka aan codsan karno marka aan quudinayno, marka aan xireyno iftiin ama waxyaabo kale oo aad muhiim ugu ah jiritaankiisa. Marka lagu daro noocyada cuntada ama talooyinka kale ee ay tahay inaan tixgelinno.
Kalluunka waxay quudiyaan marka la eego nooca asalka, hadday yihiin kulayl, hadday yihiin biyo qabow iwm.
Aquaponics waa nidaam isku dara astaamaha dhaqanka kalluunka ee ka imanaya habka dhaqameed ee biyo-dhaqashada iyo ...
Waxaa suurtagal ah inaad haysatid quraaradda oo aadan hubin waxa lagu quudiyo kalluunkaaga. Waxaa jira kumanaan ...
Haddii aad leedahay haan kalluun, waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso inaad iibsato qalabka cuntada kalluunka lagu iibiyo oo aad iska ilowdo ...
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira xayawaanno badan oo guryaha ah oo aan ka heli karno ikhtiyaar ahaan inaan nolosha kula wadaago iyo ...
Caafimaadka saxda ah ee kalluunka waa in la helo cunno wanaagsan. Maanta waxaan haynaa kheyraad farabadan oo aan ...
Cunto kalluun fasax ah
by Encarni samee 11 sano .
Markii aan tagno fasax, tusaale ahaan hadda buundada ama biyo mareenka ka jira Spain oo u oggolaanaya ...
Goorta la quudiyo kalluunka
Kalluunku waa xayawaan aan weydiisan cunto iyo, haddii aadan eegin quraaradda, ka dib markaad la qabsato ...